soo saarista xargaha korontada, farsamooyinka dharka, dharka alaarmiga
Bogga ugu weyn / Coils Air Coils / Induction Indha-indheynta Brains
Category: Coils Air Coils Tags: boodboodka, soo saaraha xargaha, dabayl kululaynta, gariiradda, Soo saaraha soo saaraha, HF dabagal adag, Iskudhicirida joogtada ah ee xargaha, Dhuumaha Sare, kobbinta induction, xirmooyinka kuleylka kuleylka, inductor induction, inductors
Induction Suufiyeynta Suufiyada loogu talagalay qaboojiyaha mashiinka korontada ee mashiinka korontada, nidaamka, mishiinka mashiinnada mashiinka dhoobada, foornada induction ee fuusha, iwm.
Iyada oo aan loo eegin qaabka, cabbirka, ama qaabka kobbinta induction waxaad u baahan tahay, waan ku caawin karnaa! Halkan waxaa ku yaal dhawr ka mid ah boqolaal naqshado ah oo aan la shaqeynay. Duufaanta qabatinka, xargaha duufaannada, dhejiyeyaasha maskaxaha ... duubis, wareeg iyo wareegsan ... Taabo-laab, shan-jibbaar, laba-laab-noqota ... under 0.10 "aqoonsi ka badan aqoonsiga 5 ... ee kuleylka gudaha ama dibedda. Wax kastoo shuruudahaaga ah, noo soo dir sawiradaada iyo tusaalooyinkaaga si aad u soo xigato. Haddii aad ku cusub tahay kuleylka kuleylka, u soo dir qeybahaaga qiimeyn lacag la'aan ah.
Waa kobbinta induction oo ay ku nuuxnuuxsadeen qalab sax ah oo inta badan ku tilmaamaya guusha ama guul darrida nidaamka oo idil.
Casriyeynta kuleyliyaha kuleylka
Dareerida tuubo naxaas leh ama saxan, qaabka naqshadaynta induction waxaa saameyn ku leh codsiga, xulashada kulaylka, cufnaanta awoodda iyo wakhtiga kuleylka. Ujeedada kobbinta induction waa in la abuuro qulqulo dheellitiran magnetic si loo abuuro waddo hadda ah ee shaqada shaqada si ay u doorato kuleylka xaafadda si loo xoqo.
The Coil induction waa in si sax ah loo dhigaa kambaniga oo u oggolaanaya kuleylka loo baahan yahay in la dhammeeyo. Farqiga hawada ama meel isku xirnaanta inta u dhexeysa qaybta shaqada iyo gudaha duubka waa in la yareeyo sababaha waxtarka. Noocyada naqshadaynta caadiga ah ee 0.125 inch (3.175 mm) ilaa 0.250 inch (6.350 mm) ayaa macquul ah in lagu burburiyo qalab casri ah.
Qeybaha qaabaysan ee aan qaabaysanayn waxay ubaahan yahiin nadiifin dheeraad ah oo u baahan awood dheeraad ah si ay uga gudubto waxqabadka liita ee saboolka ah. Xaaladahan waxaa ka mid ah xaaladaha ay ku xiran tahay hawo gaaban oo leh hawo ballaaran oo hawo leh ama qalab aan duudduub lahayn oo loo baahan yahay si loo helo aagga daaqada.
Meelaha lagu kululeeyo waxay go'aamisaa dhererka xirmadda induction. An kobbinta induction taas oo aad u gaaban waxay u baahan tahay wakhti badan oo kuleyl ah si loo ogaado kuleylka, oo loo gudbiyo, si loo daboolo aagga. An kululaynta kuleylka induction taas oo ah mid aad u ballaaran wuxuu kululeyn doonaa biro ka badan inta loo baahdo, sidaa daraadeedna waxtar u lahaan. Qalabka Is-beddelka Qalabka Is-beddelka "HLQ" wuxuu leeyahay naqshado gaar ah oo indho-indheyn ah oo kuleyliyaha ah, iyo xirmooyinka si fiican u kululeyn iyada oo aan ku hareeraysan hawsha shaqada.